Bruicojewelry ဆက်စပ်ပစ္စည်း Co. , Ltd မှ - ကြှနျုပျတို့အကွောငျး
Bruico လက်ဝတ်ရတနာအဓိကအား 14K နှင့် 18K mosaic စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအာရုံစိုက်, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လက်ဝတ်ရတနာစိတ်ကြိုက်, ဒီဇိုင်း, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်အပြောင်းအလဲနဲ့န်ဆောင်မှုပေးပါသည်။ Bruico လက်ဝတ်ရတနာစက်ရုံ, ပုံနှိပ်စက်တွေ, polishing စက်တွေ, CNC စက်တွေနဲ့လျှပ်စစ်စက်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ရှိပါတယ်ရာ, 2015 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး 500 စတုရန်းမီတာ၏ဧရိယာယူထားသောခဲ့သည်။
ကျနော်တို့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လက်ဝတ်ရတနာဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုန်ဆောင်မှုကိုပေး။ ကျနော်တို့အလွန်ကြီးစွာသောအောင်မြင်မှု လုပ်. ဝယ်ယူမှု, အရောင်း, admin ရဲ့, ဘဏ္ဍာရေးနှင့်စျေးကွက်နှင့် ပတ်သက်. အတူပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသင်းစတင်တည်ထောင်ခဲ့ကြသည်။ လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီ 50 န်ထမ်း,3ဒီဇိုင်နာများနှင့်2ပုံဆွဲပညာရှင်များရှိပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့အလွမှုပညာရှငျနှငျ့ဝိညာဉ်များနှင့်လက်ရာမြောက်သောဖက်ရှင်သဘောမျိုးနှင့်အတူငယ်ရွယ်ပြီးလုံ့လရှိသူဖြစ်ကြသည်။ ကျနော်တို့ 48 နာရီအတွင်းဖောက်သည်ရဲ့လိုအပ်ချက်တုံ့ပြန်နိုင်ပါတယ်။
ကျနော်တို့လက်ဝတ်ရတနာဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုကြွယ်ဝအတွေ့အကြုံများရှိသည်။ အရည်အသွေးမြင့်မားကိုအာမခံခြင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်, ထိုကဲ့သို့သောမြှင့်တင်ရေးတို့အတွက်ပစ္စုပ္ပန်ရငျးနှီး, အကြားအခမ်းအနားအဖြစ်ကြီးမားသောဖြစ်ရပ်များအတွက်လက်ဆောင်တွေအသုံးပြုမှု၏ကျယ်ပြန့ရှိသည်။ အဆိုပါအမိန့်နယ်ပယ်လက်ဝတ်ရတနာစတိုးဆိုင်များ, အလွတ်တန်းဒီဇိုင်နာများနှင့်ဖက်ရှင်ဆိုင်များအနေဖြင့်အဓိကအားဖြင့်ဖြစ်ကြသည်။